ကျွန်ုပ်အပြစ်အတွက်ဖခင်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ - သတင်း
Shagging, pesto pasta, rollies, £ 1,500 Santander overdrafts, မူးယစ်ဆေးဝါး၊ VK များ၊ အော့ - ၎င်းသည်သင်ပိုမိုလတ်ဆတ်သောပွဲတော်၌သင်ဝယ်ယူခဲ့သော Trainspotting ပိုစတာကဲ့သို့စတင်အသံထွက်နေသည် uni မှာသင်၏ပထမနှစ်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးစာစီစာကုံးတွင်အမှန်တကယ်မနက် ၉ နာရီသို့ သွား၍ ၂း၁ ကိုခြစ်ခြင်းကဲ့သို့ကောင်းသောအချိန်လေးများရှိခဲ့သည်။ ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့အိမ်ဖော်နဲ့အိပ်နေတာလား၊ ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယနှစ်မှာသင်အခုမုန်းတဲ့သူအုပ်စုနဲ့အတူနေဖို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးလိုမျိုးဆိုးတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။
မင်းရဲ့ boxroom ထဲကခန်းမထဲကိုထွက်သွားပြီးမကြာခင်ဒုတိယနှစ်ပြန်လာလိမ့်မယ်။ သို့သော်ပထမနှစ်၏ဤမသန့်ရှင်းသောစည်းမျဉ်း ၅၇ ခုအနက်မှအနည်းဆုံး ၄၂ ခုကိုသင်မချိုးဖောက်ပါက၊
1. အစိမ်းရောင် VK ကိုသောက်ခဲ့တယ်
ကြည့်ရှုပါ၊ မနက် ၂ နာရီဖြစ်လို့သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နာမကိုမသိဘဲပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်သည်။
စကားလုံးတစ်လုံး - crusty ။
4. လတ်ဆတ်သောလက်ပတ်ကိုဝယ်ပြီးဖြစ်ရပ် ၂၀ အနက်မှတစ်ခုသို့သွားခဲ့သည်
၁၄ ရက်လုံးလုံးအဘယ်သူသည် the လေးရဲ့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထွက်သွားနိုင်ပါသလဲ။ ကိုယ်စောင့်နေမယ်။
၅။ ပရီးမီးယားလိဂ်က ၁၀.၃၀ မတိုင်မီကလပ်သို့သွားရန်လက်မှတ်များကို ၀ ယ်ယူရန်စည်းရုံးနေသည်။
ကလေးတွေကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဒေသခံတစ်ယောက်နဲ့အမြဲတမ်းအချည်းနှီးပဲ။ သူတို့ထိုင်နေတဲ့နေရာမှာသူတို့သွားသင့်တဲ့နေရာကိုရှာဖို့လူတွေကိုစာပို့နေတဲ့တဲထဲမှာထိုင်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေကများနေတယ်။ သင်တစ်နှစ်တာလုံးလက်မှတ်ဝယ်ယူဆဲဖြစ်သည်။
၆။ မနက် ၉ နာရီဟောပြောပွဲသို့သွားသည်
မင်းဘယ်လောက်ကြာကြာမင်းသွားချင်နေတာလဲ၊ ဘယ်သူကမှအဲ့လိုလုပ်တာကိုမနှစ်သက်ပါဘူး ထိုအခါငါငါ့အပိုက်ဆံရဲ့တန်ဖိုးရှိအငြင်းအခုံရချင်တပြင်လုံးကိုသင်ရုံနိဒါန်းဆလိုက်ပေါ်တွင်တစ်နာရီကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာပြားချပ်ချပ်ကျရောက်ပါတယ်။
၁၀။ Circuit Laundry အဝတ်လျှော်ဖြင့်သင်၏ဖုန်းကိုသော့ခတ်လိုက်သည်
၁၁။ အဆောင်မှူးသို့မဟုတ်သင့်ခန်းမများနှင့်နီးကပ်သောသူတစ် ဦး နှင့်အိပ်ခဲ့သည်
ကလပ်တွင် VK တစ်ခုရရန်သင့်အားအဘယ်အရာကမျှမတားဆီးနိုင်ပါ။
13. သူတို့က 5/10 ဘွဲ့လွန်နေသော်လည်းသင်၏ seminar ကျူရှင်စိတ်ကူး
၁၅။ £5Jagerbomb အပေးအယူအတွက် (သို့) အညီအမျှစျေးပေါသောကမ်းလှမ်းမှုများအတွက် ၃ ခုသတ်မှတ်ထားသည်
၁၆။ အားကစားခန်းမအတွက်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တွန်းအားပေးရန်ပေါင် ၂၀၀ ကိုပေးခဲ့သည်
၁၇။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိစာစီစာကုံးကိုချန်ထားပြီးစာကြည့်တိုက်ထဲကိုအားလုံး - ၀ င်လာသည်
Red Bull ၏ ၂,၅၀၀ စကားလုံးသည် bullshit ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီး ၂း၂ သည်အလွန်အံ့အားသင့်စရာကောင်းလှသည်။
၁၈။ အိမ်မှထွက်ခွာပြီးနောက် pesto ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါက်ဆွဲနှင့် Deliveroo တို့မှနေခဲ့ရသည်
£ 1500 - ယခုမှာဖြစ်ပါတယ်။
20. ထို့နောက် overdraft ထွက် maxed နှင့်သင့်အမေကိုခေါ်ခဲ့ရသည်
ငါငါးဆယ် quid pleeeeeeease ချေးနိုင်ပါသလား ???
22. တစ် ဦး ကမကထ Shagged
ခင်ဗျားဟာသက်သတ်လွတ်စားဖို့၊ သက်သတ်လွတ်စားဖို့၊ DJ ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ဖို့၊ အားကစားဖြစ်ဖို့နဲ့မတ်လမှာရုတ်တရက်စူပါ Greenpeace ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ခဏကြာပြီးမှအားလုံးကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေဖြစ်လာပြီးသင်ပုံမှန်ငြီးငွေ့နေသော self x ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်သည်
27. တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားသူရဲ့တက္ကစီခိုးယူ
သင်ဟာလတ်ဆတ်တဲ့အပတ်မှာ BFF ပါ။ ဒါပေမယ့် Chloe ဟာညတစ်ညမှာမင်းရဲ့အစားအစာကိုစတင်ခိုးယူခဲ့တယ်။ အမြဲတမ်း ဘင်ထွက်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယနှစ်တွင် lit ခံရဖို့ !!!!
၃၁။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Netflix အကောင့်အတွက်စာရင်းသွင်းထားသည်
သင်၏မိသားစုအကောင့်ကိုအစဉ်မပြတ်တမ်းတနေခြင်း၊ ဒေါသထွက်နေသောသတင်းများကိုသင်၏ညီမထံမှ WhatsApp အဖွဲ့မှဖုန်းတစ်ခုထက်ပိုသောမည်သူအားမေးမြန်းနေသည်ဆိုလျှင်သင်မနေထိုင်ပါ။
၃၂။ Economist ကိုစာရင်းသွင်းရန်စာရင်းသွင်းသည်။ (က) သင်ဤ 'အခမဲ့' နားကြပ်များကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်သည် (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက
33. လတ်ဆတ်သော '' တရားမျှတတဲ့မှာအောက်မှာ, ပုံစံပိုစတာဝယ်ယူခဲ့သည်
အထူးအလေးထားဖော်ပြချက်များမှာကျွန်ုပ်သည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒီ၊ ပါတီပါတီ၊ Pulp Fiction၊ Audrey Hepburn ၁၊ Trainspotting နှင့်နယူးယောက်ဆောက်လုပ်ရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး သည်အင်ပါယာစတိတ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်အထစ်တွင်ထိုင်နေသည်။
၃၄။ အမှိုက်ပုံးကိုတစ်ချိန်ကထုတ်ယူခြင်းမပြုဘဲ Jenga ၏ကြီးမားသောစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဂိမ်းသို့မသွင်းပါနှင့်
အိမ်တစ်အိမ်လုံး eggy fart လိုအနံ့ဆိုးထွက်သည့်အချိန်တွင်သိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။
35. အိမ်ပြန်မှသင်၏ gf / bf ကိုလှည့်စားပါ
သင်၏ uni bf / gf အားလိမ်လည်လှည့်စားရုံသာမက၎င်းတို့ထပ်မံတွေ့ရှိရန်မဖြစ်နိုင်လောက်သည့်ထပ်ဆင့်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆင်တူသည်။
ပထမ ၂ ပတ်အတွင်း uni ရည်းစားအသစ်ရရှိသည်
သင်သည်သင်၏သုံးနှစ်တာကာလတစ်လျှောက်လုံးသွားပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမတိုင်မီနှစ်ပတ်အလိုတွင်ချိုးဖဲ့လိမ့်မည်။ သင် uni ၌သင်၏အချိန်ကိုလုံးလုံးဖြုန်းတီးပုံကိုစဉ်းစားရန်သင့်အားချန်ထားလိမ့်မည်။
SU တွင်ရှိသောသင်၏ uni gf / bf အသစ်ကိုလိမ်ပါ
တစ် ဦး toga tbh အတွက်ရပ်ဂ်ဘီယောက်ျားလေးခုခံတွန်းလှန်ရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
38. သင်၏အိမ်ဖော်ကဲ့သို့လူကို Shagged
39. သင် A-level တွင်သင်လေ့လာခဲ့ရာများကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်အသေးစားဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်
မင်းပထဝီဝင်လား ဘယ်လိုမျှမဖြစ်နိုင်! ငါပထဝီလည်း DID!
40. DJ တစ်ခုဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်
မင်းနာမည်က Liam ဖြစ်ပြီးမင်းက The Inbetweeners တစ်ယောက်နဲ့တူမယ်ဆိုရင်မင်းကလာမယ့် DJ အိမ်ကြီးကြီးဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သင့်ရဲ့တီးခတ်ပုံဟာဘယ်လောက်အလယ်အလတ်မှကြီးမားတယ်။
ကျောင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီ၌ပါ ၀ င်ခဲ့သည်
ဝန်ခံရမည်ကကြီးမားသောတံဆိပ်ကို ၀ ယ်ခြင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာသည်၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်နှင့်sexရာမစာလုံးများဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုပါနှင့်၊ အနည်းဆုံးသင်သည်လက်မှုပညာကိုလေးစားနိုင်သည်။ လူတွေကကျောင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲကိုဝင်တာပေါ့၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအစစ်အမှန်ပါတီတွေကိုဖိတ်တာမဟုတ်ဘူး
အချိုရည်မသောက်မီသို့မဟုတ်တစ်ညတည်းတွင်နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကြီးမားသောစကားပြောဆိုမှုသို့ရောက်ခဲ့သည်
၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကသင်ပြောနေတာကိုသင်တကယ်မသိဘူး၊ ၁၀၀ ရာနှုန်းကဘယ်သူ့ကိုမှဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာအာမခံသည်။
45. တစ်ညတွင်သင်၏ကော်ဖီများကိုမေ့သွားပြီးသင်တစ် ဦး တည်းဝယ်နိုင်လျှင်လူတိုင်းနှင့်မည်သူမဆိုကိုမိနစ် ၃၀ တောင်းစားခဲ့သည်
48. သင်၏ပထမနှစ်အများစုကိုသင်၏ uni bf / gf အသစ်နှင့် တွဲ၍ သုံးပါ
ဤသည်မှာသေချာသည်မှာသင်၏ပထမဆုံးနှစ်ကို uni ၌သုံးရန်ပျင်းစရာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်၏ uni ဘ ၀ ၏အစောပိုင်းကာလများအတွင်းသင်သည်အခြားမိတ်ဖွဲ့မှုများကိုအမှန်တကယ်ခိုင်မြဲစေလိမ့်မည်မဟုတ်ဘဲပျမ်းမျှလိင်အထက်ကိုးလကျော်ပြီးနောက်သင်ပြိုကွဲလိမ့်မည်။ ဘဝဟာခက်ခဲတယ်၊
49. သင်ကနောက်ဆုံး aux ကိုခုန်နိုင်သည့်အခါသင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Pre-J စွမ်းဆောင်ချက်အပေါ်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကသင့်အားချီးမွမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်မိသည်။
အဘယ်ကြောင့် Pitbull ကြိုက်နှစ်သက်ပါဘူး: စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။
သင်၏ကားကို Uni သို့ယူဆောင်လာသည်
သင်ကားကို uni သို့သယ်ဆောင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မှာသင်ကပုဂ္ဂလိကကျောင်းသို့သွားသည်ဟုတံဆိပ်ခတ်ကြီးကိုဝတ်ဆင်ခြင်းသည်မကောင်းသောပုံစံဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါအရင်ကဆေးခြောက်ယူခဲ့ဖူးတယ်၊ အိမ်ကနေအိမ်ထောင်ဖက်တွေနဲ့အတူပေါင်းသင်းတယ်။ အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့ကိုအကြီးအကျယ် spliffheads ပါတယ်, နီးပါးလွန်းသင်သိ။
52. သင် afters တုန်းကစတင်ခဲ့ပြီး၊ Wonderwall ကိုသေချာပေါက်တီးမှုတ်ပြီးကတည်းကပထမဆုံးသင်၏ဂစ်တာကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီ
လတ်ဆတ်တဲ့ရက်သတ္တပတ်အပြီး 53. ကြိုတင်သောက်စရာများတွင်မီးကွင်းကွင်းဖွင့်ခဲ့သည်
သေချာတာပေါ့၊ လတ်ဆတ်တဲ့ Freshers တွေရဲ့အဆင်မပြေမှုကိုချိုးဖောက်တာဟာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒုတိယသက်တမ်းမှာတော့ဘယ်သူမှ 'လေး - Whores' နဲ့ fuck ဆိုတဲ့လူတိုင်းရေတံခွန်ကိုမသောက်ကြဘူး။
54. သက်တူရွယ်တူချင်းဖိအားပေးခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်အားကစားစတင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း
သင်ဟော်ကီလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်လိုစိတ်ပြင်းပြလျှင်သင်၏ကိုယ်ပိုင် piss သို့မဟုတ်သင့်အတွက်အလားတူကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုသောက်လိမ့်မည်။
55. တောင်းဆိုမှုတစ်ခုအတွက် DJ ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်
ဒီလိုလုပ်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲလို့ထင်ကြတာလဲ။ အခြားလူများကြိုက်နှစ်သက်စေမည့်ထင်မြင်ချက်မည်သို့ပင်ရှိပါစေသူတို့ကြားလိုသည့်တောင်းဆိုမှုကိုကြွေးကြော်ရန်တဲသို့တက်လာကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ဟာမိဖုရားလို့ထင်ကြပြီးစိတ်မကောင်းစရာလူတွေအားလုံးပါပဲ။
ဒါက Vibe မဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါ beverly တောင်ကုန်းအိမ်ရှင်မတန်ဖိုးရှိမည်မျှ
ဘယ်သူမှဂရုမစိုက်ပေမယ့် 57. သင်၏ကွာဟချက်နှစ်နှင့် ပတ်သက်၍ နက်နက်နဲနဲပြောဆိုခဲ့သည်
၂။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၏အကြီးမားဆုံးစာမေးပွဲကပ်ဘေးကိုကြည့်ကြပါစို့
3) မင်းရဲ့ Uni ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာသိချင်လား။ ဤတွင်အဆိုပါ Tab ရဲ့တက္ကသိုလ်လိဂ်ဇယား 2018 ဖြစ်ပါတယ်